Samsung dia namorona milina hitrandrahana Bitcoins miaraka amin'ny Galaxy S5 | Androidsis
Na dia efa lasa aza ny taona maro taorian'ny nanombohan'ny Galaxy S5, Samsung dia nanapa-kevitra ny hanararaotra ireo singa mbola tavela na naverin'ireo mpampiasa hanatanteraka tetikasa mahaliana.
Manokana, nanangona ekipa injeniera ny orinasa mba manangana solosaina avy amina finday Galaxy S5 efa am-polony maro, izay nametrahan'izy ireo rafi-pandidiana mahazatra hanovana azy ho a cluster ho an'ny Bitcoin fitrandrahana. Fa ny tsara indrindra, amin'ny finday 40 fotsiny amin'ity maodely ity, ny orinasa dia nahavita nihoatra ny PC mahazatra izay mampiasa ny carte grapik'izy ireo hitrandrahana vola crypto.
Ny orinasa dia tsy manana drafitra amin'izao fotoana izao hametraka ireo finday avo lenta taloha hitrandrahana Bitcoins, saingy fanandramana tsotra daholo izany mba hampisehoana fa ny teknolojia taloha dia mbola azo ampiasaina ankehitriny. Ity andrana iray manontolo ity dia natao tao anatin'ny rafitry ny tetikasa iray nantsoina Fanatanjahan-tena.
"Ity sehatra vaovao ity dia manome fomba iray tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana mba hanana fiainana vaovao ny fitaovana finday Galaxy taloha, miaraka amin'ny fahafaha-manao vaovao sy ny fahafaha-mampitombo ny sandan'ny fitaovana izay hajanona ao anaty vatasarihana na hatsipy mivantana," hoy izy. Schultz, mpitondra tenin'ny Samsung.
Tamin'ny andrana iray hafa koa dia nanova takelaka taloha i Samsung Tabasy Galaxy hanovana azy ho laptop entin'ny Ubuntu. Amin'ny tetikasa hafa dia nampiasa Galaxy S3 ilay orinasa manara-maso ny mari-pana sy ny haavon'ny PH amin'ny aquarium, ary voalamina finday avo lenta tranainy misy fankasitrahana amin'ny tarehy hanaraha-maso ny fidirana trano.
Samsung Galaxy S5 manara-maso ny toetrandro sy PH an'ny aquarium
Ireo tetik'asa rehetra ireo dia hevitra tsotra izay manandrana manokatra fotoana vaovao azo ampiasaina amin'ny toeram-piantsonana taloha. Raha mbola mandeha tsara ny finday, dia azo antoka fa hahita fampiasana hafa ho azy ireo isika izay tsy mila atao manokana amin'ny fanaovana sy fandraisana antso na hafatra an-tsoratra.
Loharano sy sary: Motherboard
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung dia namorona milina hitrandrahana Bitcoins miaraka amin'ny Galaxy S5 taloha
Mety sy mahasoa tokoa ny famerenana ireo telefaona sela, hamoronana rindrambaiko hitrandrahana Cryptocurrencies "Real". Mety ho tratra ny tanjona kendrena.
Samsung dia miresaka momba ny fampisehoana fa mbola mandeha ny teknolojia taloha ary izy ireo no voalohany nandao ny findainy tsy nisy mpanohana na fanavaozana. Mode mahenika on.
Hamboarin'i Google ny olana rehetra Pixel 2 sy hanome valisoa ireo mpampiasa